I-China Meltblown fektri nabahlinzeki | I-Sinnovation
Indwangu eshisiwe encibilikisiwe ingumgogodla wemaski. Indwangu esemqoka yendwangu e-melt blown yi-polypropylene.
Ububanzi befayibha bungafinyelela kuma-1-5 microns. Kunama-voids amaningi, isakhiwo se-fluffy kanye nekhono elihle le-anti imibimbi. I-fiber ephezulu kakhulu enesakhiwo esiyingqayizivele se-capillary yandisa inani nendawo engaphezulu yemicu endaweni yunithi ngayinye, ukuze indwangu eshisiweyo encibilikisiwe ibe nokuhlunga okuhle, isivikelo, ukufakwa kokushisa kanye nokufakwa kawoyela. Ingasetshenziswa emikhakheni yomoya, izinto zokuhlunga uketshezi, izinto zokuhlukanisa, izinto zokufaka, imaski, impahla yokulondolozwa kokushisa, impahla yokufaka i-oyela nendwangu yokusula.
Le micu ye-Ultra-emihle enesakhiwo esiyingqayizivele se-capillary yandisa inani nendawo engaphezulu yemicu endaweni yunithi ngayinye, ukuze indwangu eshisayo encibilikisiwe ibe nokufafazwa komoya okuhle, futhi kungumbhalo omuhle wemaski. Ezikhungweni ezinkulu zokwelapha ezisezingeni eliphakathi nendawo, kuzamazama komhlaba nasezindaweni ezithintekile izikhukhula, ezikhathini eziphezulu zezifo ze-atypical, umkhuhlane wezinyoni kanye ne-H1N1, iphepha lokuhlunga elicibilikile linokusebenza okuqinile kokufayeka futhi lidlala indima ebalulekile Lidlala indima engenakuphikwa.
Indwangu eshaywe yi-Melt is the basic material of masks.I-mask yezokwelapha kanye ne-N95 mask ibunjwe ungqimba we-spunbond, ungqimba oluncibilikile kanye nesendlalelo se-spunbond, phakathi lapho ungqimba lwe-spunbond kanye nencibilikisiwe eyenziwe nge-polypropylene PP.
Indwangu yokuncibilikisa iyindwangu esemqoka yokwenziwa kwezinto zokwenziwa komaskandi. Ngokusho kwencazelo, ingahlukaniswa ngezibonakaliso ezintathu: 90, 95 kanye ne-99. Le mininingwane emithathu imele ukusebenza kwemifanekiso emithathu ehlukene, 90%, 95%, 99% .Izindatshana zendwangu eshaywe umoya incibilikisiwe 90, 95 kanye no. 99, elihambisana nokukhiqizwa kwamamaski amathathu ahlukene (N90 / N95 / N99).
Indwangu eshaywe ngomhluzi isetshenziselwa ikakhulukazi lokhu:
a. Hlunga impahla
b. Izinto zokwelapha nezempilo
c. Izinto zokuvikela imvelo
d. Izinto zokugqoka
e. Izinto zesaphaza sebhethri
f. Izinto zokusula
Esedlule: Iribhoni lendlebe
Olandelayo: Umshini weMask